Top taariikhqorihii 5 screen
Apowersoft waa barnaamij aan in badan caan ah marka ay timaado u baaraan duubo sidii dhoobada qalab iyo barnaamijyada awood badan yihiin waxaa si ay u suurto gal ah in hawsha la dhammeeyo. Waxaa sidoo kale in la xuso in barnaamijka sidoo kale wuxuu hubiyaa in user helo natiijada celcelis ahaan iyo arrimaha guud ee la xiriira duubo shaashadda aan la xalin sida dhisay shaqeynayaan waa weyn iyo user wuxuu u baahan yahay in la sameeyo qaar wadar ahaan in si joogto ah u qalabka waxaa loo isticmaalaa in arrintan la xiriira. Tutorial Tani waa dhan oo ku saabsan kuwa isticmaala kuwaas oo raadinaya Apowersoft kale oo.
Waa maxay Apowersoft?
Waa codsi screen universal duubo taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo celcelis ahaan barnaamijka fanka diiwaan screens, kulan oo uu qabtaa functionalities kale badan loo daryeelka iyo kaamilka ah. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in ay sidoo kale u hesho in ay isticmaalaan celcelis ahaan iyo barnaamijka caadiga ah waxaa lagala soo bixi, si natiijada celceliska ayaa la kulantay arrintan la xiriira.
Barnaamijka wuxuu leeyahay versions dhowr iyo hubiyaa in user helo natiijada celcelis ahaan website-ka rasmiga ah ee barnaamijka iyo barnaamijka waxaa loo arkaa mid ka mid ah celceliska sida faylka exe updated wax walba waa in ay caawiyaan user Khasab ma aha in la raadiyo kale barnaamijyada la xiriira arrintaas. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ogolaan waa in buuxa in barnaamijka si fiican loo tijaabiyey hor iibka dambays ah laga gaaraayo si natiijada celcelis ahbaa iyo waayo-aragnimo guud celcelis ahaan waxaa kaloo soo urursaday. Markaas barnaamijka ayaa interface ad fudud sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in aad u hesho celcelis ahaan iyo natiijada caadiga ah ee arrintan la xiriira. Barnaamijka wuxuu leeyahay interface fudud oo sabab ka mid ah in la xusay in user laylis helo arrimaha lahayn in la hubiyo in barnaamijka loo isticmaalay markii ugu horeysay. Arrimaha guud ee la xidhiidha barnaamijka sidoo kale waa kuwa fudud iyo xalka ayaa sidoo kale waxaa lagala soo bixi karaa online si aad u hesho xaqiiqada ah in diinta ka kaaftoomi free waxaa ku riyaaqay waqtiga oo dhan.
Isticmaalka barnaamijka iyo faa'iidooyinka la xiriira
Barnaamijka waa isha furan iyo user wuxuu samayn karaa isticmaalka ugu wanaagsan ee ah in ay la soo bixi iyo celceliska iyo isticmaalka joogtada ah loo soo maray oo lacag la'aan ah. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in ay sidoo kale u hesho in ay salka barnaamijka waxaa ku riyaaqay la functionalities weyn haddii version ka bixisay waxaa doortay oo ay tahay sabab la mid ah in badan oo dadka isticmaala ayaa sidoo kale doorato version ku bixisay sidii arrintani waxa ay timid iyada oo faa'iidooyinka weyn iyo arrimaha la xiriira ayaa sidoo kale loo xaliyay iyada oo wax dhibaato ah. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in qaarkood in barnaamijka la bartay si fiican oo rating celceliska iyo daacad ah waxaa la siiyaa si ay dib u eegid wanaagsan waxaa weeye in la caawiyo dadka kale ee raba in ay helaan barnaamijkan.
Top 5 lagu bedelan karo Apowersoft taariikhqorihii screen hawlo awood badan
Ka dib waxaa la shanta kale oo si Apowersoft ah in la hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah tahay keeni mar walba heli lahaa. Kale oo kuwan kuwii la imanaysa marka la functionalities weyn iyo aqoonta guud ee horumarinta ay sidoo kale muujisay in arrintan la xiriira.
Waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican in loo tixgeliyaa sida xarun madadaalo ah oo loogu talogalay kuwa raba in ay ka faa'iideystaan ​​xaqiiqada ah in ugu fiican iyo kan gobolka ee barnaamijka fanka la riyaaqay. Waxaa la iman dhisay taariikhqorihii video taas oo u baahan ma download gaar ah sida barnaamijka ugu muhiimsan waa inuu xaqiijiyo in taariikhqorihii ahaa ayaa waxaa sidoo kale soo bixi. Shaqeynta guud ee qalab kale oo ka mid tafatirka, la isku qasin, geeyo iyo dajinta ee videos ah. Jidka si taariikhqorihii video for kuwa la isticmaalayo barnaamijka waa menu> video taariikhqorihii sida waxa loo arki karaa in ay tiradaasi hoos ku qoran.
Waxa kale oo ay qabsatay ee dhufto labada daaqadaha iyo sidoo kale Mac ah oo la soo saaro by tumaal casriga ah si ay usoo jiitaan user si uu madal natiijada ugu wanaagsan salaysan arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in user sidoo kale waa in kalsooni ku qaba in madal ugu fiican in la soo saaro qaab of Jing la soo bixi iyo riyaaqay sida barnaamijka waa il furan oo lacag la'aan ah.
Ugu weyn iyo waxa ugu fiican in la soo xiriira barnaamijka tani waa xaqiiqada ah in dhisay tutorial laga heli karaa wakhti kasta oo u leh adeegsiga ugu fiican iyo hawlaha ugu horumarsan yihiin sahamiyey oo dhan wakhtiyada. Sidoo kale waa in la ogaadaa in ka duwan barnaamijyada kale tani mid qaadataa meel yar oo lagu rakibi karo si fudud oo ku qanacsan.
Socodka 4. Screen
Tani waa utility lacag iyo hawlaha la gundhig gudahood waa kuwa ugu awooda badan. Waxaa sabab u ahaa xaqiiqada ah in ay ku dhiirigelinayaan in ay hubiyaan in taariikhqorihii shaashadda markii lagala soo bixi oo lagu rakibay soo arrimaha ugu yar iyo user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah barnaamijyada farshaxanka arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale dhirtuba link ee kor ku xusan oo loo isticmaalo sida URL a download.
Soo diyaariyay pad bandhigista barnaamijkan waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee ay tahay in la soo bixi si user helo ugu fiican iyo kan gobolka ee natiijada farshaxanka ee la xiriirta in qalcado lagu dumiyo shaashadda oo lagu qoro. Barnaamijka ayaa waxaa lagu qiimeeyay sare iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user sidoo kale waa in la hubiyo in ugu wanaagsan iyo qalabka ugu marsan oo ay gundhig u yihiin in la isticmaalo si ay u helaan in ay muhiimka ah si ay natiijada ugu wanaagsan yihiin helay.
> Resource > Record > Top 5 Alternative si Apowersoft taariikhqorihii screen hawlo awood badan